Fampiharana sakafo hariva misolelaka rantsantanana; Androany, Pastry | Androidsis
Fampiharana sakafo hariva misolelaka rantsantanana; Androany, Pastry
Azo antoka fa amin'ny Krismasy, mihoatra ny iray amin'ireo mpamaky antsika no handrano ny vavany, ary efa hadinony rahampitso alohan'ny sakafo izay hanombohan'ny fanapahan-kevitsika ho an'ny taona vaovao. Ny marina dia izao indrindra amin'ny Applications ho an'ny sakafo hariva ary hilelaka ny rantsan-tananay dia nanapa-kevitra ny haka nify mamy izahay, ary hampiasa ny iray amin'ireo fampiharana ireo izay natao ho mpanakanto rehetra ao an-dakozia miaraka amin'ny tsindrin-tsakafo mahafinaritra indrindra. Izy io dia manana anarana somary iraisana; Fivarotana mofomamy, fa tsy latsa-danja mahaliana noho izany.
Ny tena marina dia raha ny fahitana azy voalohany, ny fampiharana dia tsy manana ny iray amin'ireo endrika mampientanentana azy ireo, fa farafaharatsiny, ao anatin'ny fahatsoran'ilay nofidiny dia tsy vitany ny mampitahotra avy hatrany ny ramanavy. Na dia tsy heveriko aza fa ny mety indrindra amin'ny tsindrin-tsakafo momba ny tsindrin-tsindrin-tsakafo dia ny palette mainty sy fotsy, farafaharatsiny azo zahana izany, tsy reraka ny maso ary toa kanto kokoa aza izy ireo noho ireo fitambarana hafa izay notsikerainay mafy tamin'ity faritra iray noho ny fisehosehoana sy mandreraka be loatra.
1 Pastry: tompon'ny tsindrin-tsakafo
1.1 Recipe sy recette
1.2 Torohevitra sy teknika
Pastry: tompon'ny tsindrin-tsakafo
La App fanendasana Afaka alaina maimaimpoana tanteraka amin'ny Google Play izy ary manolotra fanavaozana tsindraindray, noho izany mandritra izao fotoana izao, na dia mila fanatsarana ny endriny sy amin'ny antsipiriany sasany aza toy ny andian-teny izay miditra ao amin'ny Anglisy momba ireo menus na loko misy rohy kely dia kely, mijanona ho mavitrika ary miaraka amin'ny fanovana mitohy. Avy eo dia holazainay aminao hoe inona ireo toetra mampiavaka azy amin'ny fampiharana fandrahoana nahandro maro hafa izay fantatray, ary ambonin'izany rehetra izany, inona no azonao atao amin'izany raha manapa-kevitra ianao hanome azy toerana amin'ny terminal Android anao .
Recipe sy recette
La Fampiharana sakafo mahandro tsindrin-tsakafo manana resipeo tsindrin-tsakafo an-jatony. Afaka mahita ny mahazatra indrindra isika, fa koa ireo mifandray amin'ny sakafo iraisam-pirenena izay tena tianay hosedraina. Mbola bebe kokoa noho izany ankehitriny amin'ny fankalazana be dia be sy hetsika be dia be amin'ny Krismasy. Ny marina dia hoe ankoatry ny fomba fahandro azy dia mahita fanazavana mazava momba ireo akora sy ny fizotrany harahina isika. Amin'ity tranga ity dia tsy misy safidy ho very. Madio ny teny. Mazava ho azy, efa nampitandrina antsika izy ireo fa raha ny fizarana entona ilaina dia ilaina foana, raha ny tsindrin-tsakafo dia mety ho izy ireo no antony tsy hiafarantsika ny valiny andrasana.
Torohevitra sy teknika
Fa ankoatry ny fomba fahandro, izay azo antoka fa ho tadiavinao hahatongavana any amin'ny faritra misy anay Fampihinan-tànana amin'ny fisakafoanana hariva, Manolotra torohevitra, fika ary hevitra ho anay koa ny fampiharana ho lasa mpahandro mofomamy tsara indrindra. Ataovy ao an-tsaina fa ao an-dakozia dia misy teknika isan-karazany foana hanomanana ny lovia, fa raha ny tena izy ny sasany dia tsara kokoa noho ny sasany, ary indraindray, ny tsy fifehezana ny iray amin'izy ireo dia midika fa tsy ho azontsika ny lovia farany. Ary amin'izany lafiny izany dia toa mahaliana ahy ny fanazavana ataon'izy ireo amintsika ao anatin'ny fampiharana. Mazava ho azy, ny vao manomboka dia afaka mahazo be amin'izy ireo, saingy azo antoka fa afaka manao izany koa ny manam-pahaizana momba ny tsindrin-tsakafo.
Sahy manandrana ve ianao Baking amin'ny Android-nao ary lazao anay hoe nanao ahoana izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Fampiharana sakafo hariva misolelaka rantsantanana; Androany, Pastry
Avereno jerena ny HTC Desire 816, terminal Android manaitra ny 300 Euros fotsiny